Pebble Coin စျေး - အွန်လိုင်း XPB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Pebble Coin (XPB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Pebble Coin (XPB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Pebble Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
XPB – Pebble Coin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Pebble Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Pebble Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Pebble CoinXPB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0835Pebble CoinXPB သို့ ယူရိုEUR€0.0711Pebble CoinXPB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0638Pebble CoinXPB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0764Pebble CoinXPB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.751Pebble CoinXPB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.529Pebble CoinXPB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.86Pebble CoinXPB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.313Pebble CoinXPB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.111Pebble CoinXPB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.116Pebble CoinXPB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.87Pebble CoinXPB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.647Pebble CoinXPB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.458Pebble CoinXPB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹6.24Pebble CoinXPB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.14.1Pebble CoinXPB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.115Pebble CoinXPB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.126Pebble CoinXPB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.6Pebble CoinXPB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.58Pebble CoinXPB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥8.85Pebble CoinXPB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩98.82Pebble CoinXPB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦32.34Pebble CoinXPB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽6.13Pebble CoinXPB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.31
Pebble CoinXPB သို့ BitcoinBTC0.000007 Pebble CoinXPB သို့ EthereumETH0.000211 Pebble CoinXPB သို့ LitecoinLTC0.00142 Pebble CoinXPB သို့ DigitalCashDASH0.000869 Pebble CoinXPB သို့ MoneroXMR0.000884 Pebble CoinXPB သို့ NxtNXT6.29 Pebble CoinXPB သို့ Ethereum ClassicETC0.0118 Pebble CoinXPB သို့ DogecoinDOGE23.4 Pebble CoinXPB သို့ ZCashZEC0.000945 Pebble CoinXPB သို့ BitsharesBTS3.05 Pebble CoinXPB သို့ DigiByteDGB2.66 Pebble CoinXPB သို့ RippleXRP0.277 Pebble CoinXPB သို့ BitcoinDarkBTCD0.0028 Pebble CoinXPB သို့ PeerCoinPPC0.268 Pebble CoinXPB သို့ CraigsCoinCRAIG37.05 Pebble CoinXPB သို့ BitstakeXBS3.47 Pebble CoinXPB သို့ PayCoinXPY1.42 Pebble CoinXPB သို့ ProsperCoinPRC10.21 Pebble CoinXPB သို့ YbCoinYBC0.00004 Pebble CoinXPB သို့ DarkKushDANK26.07 Pebble CoinXPB သို့ GiveCoinGIVE176.07 Pebble CoinXPB သို့ KoboCoinKOBO18.53 Pebble CoinXPB သို့ DarkTokenDT0.0769 Pebble CoinXPB သို့ CETUS CoinCETI234.68
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 03:30:03 +0000.